Amavidiyo enkulumo eyisihluthulelo kaSepthemba 7 isiyatholakala ku-YouTube | Ngivela kwa-mac
Amavidiyo enkulumo eyisihluthulelo kaSepthemba 7 aseyatholakala ku-YouTube
Ngemuva kwezinyanga eziningi zokuqagela, amahemuhemu nokunye, ngoLwesithathu olwedlule, ngoSepthemba 7, sishiye ukungabaza futhi ekugcineni iningi lamahlebezi azungeze ukwethulwa kwe-iPhone 7 entsha aqinisekisiwe.Kuyacaca ukuthi yonke le nsumansumane iyabulala futhi isusa yonke inzalo yesitokofela, njengoba sikwazile ukuqinisekisa, ngaphandle kombala we-Deep Blue nokuqoshwa kwe-4k kuma-fps angama-60 ngalinye lamahemuhemu lagcwaliseka. Kepha ukushiya eceleni le "nkinga" yamahemuhemu, abezindaba njengathi okuyibo ababhekene kakhulu, kule ndatshana sizokukhombisa amavidiyo abukekayo inkampani esizinze eCupertino asibonise yona ngesikhathi sethulwa.
1 Ividiyo yokuphromotha ye-iPhone 7
2 Ividiyo yokukhuthaza ye-Apple Watch Series 2
3 Ividiyo yokuphromotha yama-AirPod
Ividiyo yokuphromotha ye-iPhone 7
Njengakwezithombe eziningi ezakhonjiswa yi-Apple ngesikhathi sombhalo osemqoka, kule vidiyo singabona ukusebenza kwe-iPhone 7 kumnyama ocwebezelayo, lapho kuboniswa khona ikakhulukazi ikhwalithi yezithombe ekukhanyeni okuphansi, okuyisici ebesidlulwa kakhulu ngaso ngabaseKorea kwaSamsung kumamodeli wabo wakamuva. Ikhamera entsha enamalensi ayisithupha kanye nemisebenzi engaphezu kwezigidi eziyi-1.000 25 eyenziwe ngamamodeli amasha ngama-millisecond angama-XNUMX kuphela ibhekene nalokhu kuthuthukiswa.
Ividiyo yokukhuthaza ye-Apple Watch Series 2
Enye yezinto ehehe kakhulu ngenkathi kwethulwa i-Apple Watch yisipikha esisha esihlanganisa i-Apple Watch Series 2, isipikha esenzelwe dudula amanzi njalo lapho ikhala. Lokhu kanye nezinye izindlela zokubekwa uphawu zinesibopho sokuthi sibhukude nesizukulwane sesibili se-Apple Watch.
Ividiyo yokuphromotha yama-AirPod
Ama-AirPod bekuyizimenywa ebezingalindelwe muntu embhalweni oyinhloko, ngoba ngokusho kwamahlebezi akamuva i-Apple ibisasebenza kuwo, kepha ngokususa i-3,5 mm jack bekufanele inikeze isisombululo ukuze ikwazi ukulalela umculo ngenkathi ishaja le divayisi. Lawa mahedfoni amasha basinikeza amahora ama-5 okuzimela futhi izongena emakethe ngama-euro angama-175.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Amavidiyo enkulumo eyisihluthulelo kaSepthemba 7 aseyatholakala ku-YouTube
Ngalesi adaptha ungalalela umculo bese ukhokhisa i-iPhone 7 yakho ngasikhathi sinye
Ngabe ukugeza nge-Apple Watch kungenzeka? Yilokhu ongakwenza nongakwazi ukukwenza